Prof. Axmed Ismaaciil Samatar Oo Soo Bandhigay Hadal Uu Cali Khaliif Galaydh U Sheegay 5 Maalmood Ka Hor Geeridiisa – somalilandtoday.com
Prof. Axmed Ismaaciil Samatar ayaa sheegay in Alle ha u naxariistee in Dr. Cali Khaliif Galaydh uu Geeridiisa ka hor uu aad uga walaacsanaa inaan Madaxda Somaliland diyaar u ahayn inay ka dhabeeyaan oo ay fuliyaan heshiiskii uu Maamulkiisii Khaatumo la galeen Madaxweynihii hore ee JSL Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo)
Prof. Axmed Ismaaciil Samatar oo Geerida Cali Khaliif ka qoray Qormo dheer wuxuu ku sheegay inuu ahaa Aqoon, Siyaasi iyo Waxgarad ka baxay Ummadda Soomaaliyeed, isagoo sheegay in markii ugu horraysay ee ay ku kulmeen ahayd 1971-kii, markaas oo ay ku kulmeen Magaalada London ee dalka Ingiriiska.
Prof. Samatar wuxuu sheegay in Cali Khaliif oo ay aad isku dhex galeen sannadkii 2017-kii ay yeesheen shirar iyo kulamo badan.
Wuxuu intaa ku daray in Labadooduba (Samatar iyo Galaydh) ay ugu yaraan laba Munaasibadood kula kulmeen Madaxweyne Biixi dabaqayaadii sannadkii 2017-kii, taas oo ay saddexdooduba iskula garteen in Dr. Cali Khaliif uu soo diyaariyo qodobbada ugu muhiimsanaa heshiiska ay Khaatumo la gashay Madaxweyne Siilaanyo.
“Markii ugu dambaysay ee aan la hadlay Dr. Galaydh waxay ahayd 5 Maalmood ka hor Geeridiisii lama filaanka ahayd ee Jigjiga, markaas wuxuu si cad oo walaac uu qabay la socdo iigu sheegay in hoggaanka Somaliland aanay dareen soo jeeda u hayn oo wakhti lumis iyo Gaabis wadeen, taasi waxay dhashay inaan wax weyn la fulin illaa hadda sida uu sheegay..” ayuu Prof. Samatar ku yidhi Qormadiisa uu ku qoray Afka Ingiriisiga.
Wuxuu sheegay Samatar inuu Cali Khaliif Galaydh u sheegay inay wax weyn ku soo arkeen socdaalkoodii ay ku mareen Gobollada kala duwan ee Somaliland oo ay dhallinyarada ugu jeediyeen khudbado kala duwan.
Qoraalkan oo lagu baahiyey Shabakadda Somaliland chronicle wxuuu Prof. Samatar ku sheegay in Bulshada Khaatumo looga baahan yahay inay soo xulaan shakhsi bisil, maskax furan, aqoonyahan ah oo buuxiya kaalintii Dr. Galaydh oo hoggaamiya sidii loo fulin lahaa heshiiskii uu Galaydh la galay Somaliland.
Wuxuu sheegay Samatar Maqnaanshaha Bulshada Sool ka maqan yihiin Somaliland ay hoos u dhigi doonto guul kasta oo ay Somaliland gaadhay “Marka la eego hoggaanka hadda iyo ka mustaqbalka ee Somaliland wakhtigu waa ku sii gabaabsi, sidaasi darteed waxa muhiim ah inay firfircooni ku gedaamaan wada-hadallada oo dib loo kiciyo, oo fulinta heshiiskii loo dhaqaajiyo sida ugu wanaagsan. Waxa Daruuri ah in markan wax laga qabto waxyaabaha ay doonayaan Bulshada Sool oo la sharfo oo la karaameeyo muwaadin Qadarin ballaadhin leh (Cali Khaliif Galaydh). Runta dhayda ka caddaatay soddonkii sanadood ee u dambeeyay waxay tahay in guulaha la majeertay ee Somaliland gaadhay ay weligeed hoos u dhigi maqnaanshaha Bulshada Gobolka Sool oo intiisa badani ay weli maqan yihiin..”